कसरी राम्रो प्रस्तुतीकरणको लागि क्रिसमस उपहार बेर्ने क्रिएटिव अनलाइन
जुडित मर्सिया | | प्रेरणा, धेरै
तपाईंले पहिले नै थाहा पाउनु पर्दछ, हामी कुन हदसम्म छौं एक उत्पादन प्रस्तुत गर्नुहोस्, खाना वा कुनै वस्तु हाम्रो सकारात्मक वा नकारात्मक धारणालाई प्रभावित गर्दछ। पहिलो धारणा पनि हो, धेरै जसो अवस्थामा, उपहार आफैं भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण। को "को रूपमा" बढी गर्न सक्छ "के".
यदि तपाई धेरै ब्रान्डहरु मध्ये हेर्नुहुन्छ यदि ती मध्ये धेरै जसो छैन भने, प्याकेजिंगमा तिनीहरूको बजेटको एक हिस्सा खर्च गर्नुहोस् र ती सबै यसले देखाउँदछ। हामी उनीहरूले अनुसन्धान, डिजाइन र उत्पादनमा गरेको लगानीलाई सन्दर्भित गर्दछौं।
1 राम्रो रैपिंगको साथ उपहार प्रस्तुत गर्नुहोस्
2 म कसरी राम्रो प्याकेजि or वा प्रस्तुतीकरण प्राप्त गर्न सक्छु?
3 बक्सलाई उपहार र्‍यापिंगको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्
4 हामी मध्ये कसले टिकट वा टिकट दिन्छौं: निजीकृत खामहरू
5 आकर्षक पेपर झोला
6 समूह उपहार गर्न एक विकर टोकरी
राम्रो रैपिंगको साथ उपहार प्रस्तुत गर्नुहोस्
हामीले थोरै बढी ट्रेडमार्कहरू जस्तै सोच्नु पर्छ र हाम्रो उपहारलाई महत्त्व दिनुपर्छ जुन यो योग्य छ ताकि यो देखिन्छ। यसको मतलब हामीले गर्नै पर्छ हामीलाई काम गर्नुहोस् प्रस्तुतिकरण, सबै विवरण थप। बेवास्ता गर्न पहिलो चीज गरीब गुणवत्ता उपहार कागजातहरू हुन्, जसले हामीलाई केहि पनि प्रदान गर्दैन, उनीहरूले घटाउन सक्छन्। तिनीहरू बाहिर जान्छन् र हाम्रो प्याकेजलाई सुस्त देखिन्छन्।
म कसरी राम्रो प्याकेजि or वा प्रस्तुतीकरण प्राप्त गर्न सक्छु?
हामी तपाईंलाई यस लेखमा जवाफ दिन्छौं, र शान्त छौं किनकि हामीसँग सबै प्रकारका छन्:
ठूला र साना वस्तुहरू.
उपहार धेरै उत्पादनहरू.
टिकट वा टिकटहरू केहि शो को लागी।
धेरै संग को लागि आवरण समय.
विचारहरु व्यक्त गर्नुहोस् जो धेरै समय लगानी गर्न सक्नुहुन्न वा शिल्प कौशल छैन।
बक्सलाई उपहार र्‍यापिंगको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्
हामी बक्सहरू प्रयोग गर्न सक्दछौं जसले गर्दा हाम्रो उपहार सुरक्षित छ, र जे भए पनि सबै कुरा एक समान र सुरुचिपूर्ण छ। साथै, यदि हाम्रो उपहारसँग धेरै वस्तुहरू छन् भने तिनीहरूलाई समूहबद्ध गर्न यो उत्तम तरिका हो। यो विधिले हामीलाई मद्दत गर्दछ यदि हामीसँग धेरै समय छैन भने हामी समय समर्पण पनि गर्न सक्दछौं र यसलाई अझ पूर्ण बनाउँदछौं। हामी केही विचारहरू हेरौं ताकि हाम्रो बक्स दश हो।
हामी सक्छौ भर्न con कागज टाउको o प्लास्टिक। अर्को विकल्प प्रयोग गर्नु हो पुछ्ने कागजयो कागजको एकदम हल्का र पातलो प्रकारको छ। यसको ठूलो फाइदा, यस मामलामा, त्यो हो यो हो ह्यान्डल गर्न सजिलो। यी सबै सामग्रीहरू तपाईं सक्नुहुन्छ खरिद गर्नुहोस् en अनलाइन पसलहरू वा कहिँ पनि भित्र सामग्री o बजार.
दिनु अधिक रंग र जीवन शक्ति केही राख्छ क्यान्डीहरू o मिठाई। हामीसँग खुशी पनि गर्न सक्छौं रंगीन पोम्पमहरू। एक प्राप्त गरौं प्रभाव भर्नुहोस्, त्यो हो, यो धेरै धेरै पूर्ण छ। विचार यो हो कि जब उपहार प्राप्त गर्ने बक्स खोल्छ, तिनीहरूसँग हुन्छन् धेरै भरिएको महसुस. नेत्रहीन जित्ने छ, यो काम, पूर्ण र शानदार देखिनेछ.
हामी मध्ये कसले टिकट वा टिकट दिन्छौं: निजीकृत खामहरू
यदि तपाइँको उपहार कागज छ किनकि तपाइँले प्रिन्ट गर्नु भएको छ टिकटहरू थिएटर, फुटबलमा जान वा कुनै अन्य घटना र तपाईं यसलाई भित्र राख्नुहुनेछ समतल र बोरिंग, हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं कि तपाईले पढिरहनुहोस् किनकि यो तपाईं जानुहुन्छaचासो.
यसको लागि व्यवस्थित नगर्नुहोस् र यसलाई तपाईंको उपहारसँग मिलाउनको लागि लपेट्नुहोस्। तिनीहरूले तपाईंको खामलाई कलाको काममा बदल्न सक्छन्। यी मितिहरूको लागि, तपाईं सक्नुहुन्छ खामलाई क्रिसमस प्रतिमा वा चरित्रमा रूपान्तरण गर्नुहोस्। हामी तपाइँलाई केहि विचारहरू छोड्दछौं, र हामी ती सबै घटनाहरूको लागि हो भनेर दोहोर्याउन कहिल्यै थाक्दैनौं। साधारण उदाहरणहरू y अरु बढि विस्तृत जोसँग समय छ र शिल्पको आनन्द लिन्छ। ल यसरी हामी गर्छौं!
यी खामहरू हुन् हातले बनेको। हामी बिभिन्न र of्गका कार्डहरू प्रयोग गर्छौं जुन हामीले यसलाई उचित आकार दिदै काट्नुपर्नेछ ताकि पछि उनीहरूलाई यस्तै प्रकारले ग्लू गरौं कि हामी फरक-फरक क्रिसमस वर्णहरू पाउनेछौं। यस अवस्थामा हामी तपाईंलाई देखाउँदछौं रेनो। तिनीहरू गर्न सजिलो छ, यदि हामी खरीद गर्छौं भने खैरो खामहामीले केवल केही विवरणहरूको साथ यसलाई पूरा गर्नुपर्नेछ:
सींगहरू खामको भिन्न भिन्न रंगको खैरो र colorको। यदि हाम्रो खाम कालो गाढा खैरो छ भने, हामी सीsहरूको लागि फिक्काको टोन र यसको विपरित प्रयोग गर्नेछौं।
को ओजोस हामी तिनीहरूलाई सेतो कार्डबोर्डको साथ गोलमा काट्छौं। तिनीहरूको भित्र हामी अर्को र colorका केहि साना क्षेत्रहरू टाँस्नेछौं। हामी तिनीहरूलाई मार्करको साथ पनि तान्न सक्छौं।
La रातो नाक यो यस चरित्रको सबै भन्दा प्रतीकात्मक स्पर्श हो। हामी यसलाई पछाडिको त्रिकोणीय फ्ल्यापमा राख्दछौं।
अर्को विचार, जुन म व्यक्तिगत रूपमा सोच्छु धेरै मूल, पुन: निर्माण गर्नु हो सान्ता क्लॉज पोशाक o सान्टा क्लाउज। अझ बढी छ सरल माथि भन्दा। यस अवस्थामा हामी खरीद गर्नेछौं रातो खाम। हामी यसलाई पुन: सिर्जना गर्न कालोमा फराकिलो पट्टी काट्छौं पोशाक बेल्ट र को लागी एक सुनहरा आयत बोकल। हामीले यसलाई टाँस्यौं र हामीसँग पहिले नै रचनात्मक र क्रिसमस ईन्फाफा छ। हामी चित्रमा देख्छौं, हामी सक्छौं लेख्नुहोस् el nombre उपहार प्राप्त गर्ने व्यक्तिको केन्द्रमा.
पोडेमोस सजावट वा क्रिसमस वर्णहरूमा खामहरू सजाउनुहोस्। हामीसँग छ तिनीहरूलाई आकर्षित गर्न विकल्प वा कार्डबोर्डको साथ रचना बनाउनुहोस्, वा छवि डाउनलोड गर्नुहोस् इन्टरनेटबाट र टाँस्नुहोस्। छ प्रदर्शन गर्न धेरै छिटो र नतिजा, हामीले छविमा देखेको जस्तै राम्रो छ।
र पक्कै पनि सबैभन्दा चाहिएको विकल्प अर्को हुनेछ यो ती सबैको लागि हो तपाईंसँग पर्याप्त समय छैन वा तपाईं शिल्पमा राम्रो हुनुहुन्न। यी खामहरू डाउनलोड गर्न योग्य छन्यसैले तपाईले केवल ठेगाना लाई सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन्छ ठेगानाहरू जुन हामी तल फेला पार्दछौं y टेम्पलेटहरू डाउनलोड गर्नुहोस्। छाप्नुहोस्, काट्नुहोस् र टाँस्नुहोस्। यसले तपाईलाई आश्वासन दिनेछ सुन्दर र मूल डिजाइन.
लिङ्क डाउनलोड गर्न योग्य सान्ता क्लज को।
लिङ्क डाउनलोड गर्न योग्य हिममानव।
आकर्षक पेपर झोला
यदि हामी स्टोरमा उपहारहरू खरीद गर्छौं भने तिनीहरूले हामीलाई बाहिरको ब्रान्डको साथ झोला दिन्छन्। हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईलाई ब्याग परिवर्तन गर्न को लागी अर्को एक उचित लागि क्रिसमस मितिहरु.
त्यहाँ धेरै छन् सजावटी झोला क्रिसमस मोटिफ संग जुन हामी गर्न सक्छौं खरिद गरेको, तर यदि तपाईं आफूलाई एक राम्रो DIY उपहार मार्क गर्न चाहनुहुन्छ भने एउटा साधारण कागजको झोला आफैं सजाउनुहोस्। तपाईलाई केवल खैरो कागजको ब्यागहरू किन्नुपर्दछ, जीवनकालको र तपाईको कल्पनालाई उडान दिनुहोस्। केहि विचारहरू जुन हामी क्रिष्टमस पोस्टकार्डहरू बनाउन छोड्छौं झोलाहरूमा लागू गर्न सकिन्छ। प्रवेश गर्दछ यहाँ पोष्टमा जानुहोस्।
यो साधारण उदाहरण हो जुन हामीले पहिले क्रिसमस पोष्टकार्डहरू बनाउनको लागि देख्यौं। यो बारेमा छ स्यान्त क्लाउजको अनुहारमा झोला परिवर्तन गर्न। तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, हामी यसलाई धेरैमा लागू गर्न सक्दछौं अन्य ढाँचाहरू:
समूह उपहार गर्न एक विकर टोकरी
यदि हामीसँग उपहारको रूपमा धेरै वस्तुहरू छन्, र हामी त्यसलाई कसरी समूहित गर्ने थाहा छैन, हामी आफ्नो टोकरी सिर्जना गर्न सक्दछौं। द्वारा क्रिसमस धेरै। विचार यो छ कि सबै बाँकी छ राम्रो राखिएको ताकि यो हामी सार्दैन र दृष्टि राम्रो हुन। हामी प्रयोग गर्न सक्दछौं, बक्सहरू जस्तै,aपृष्ठभूमि को लागी भर्नुहोस्। हामी सबै वस्तुहरू रणनीतिक हिसाबले राख्नेछौं, र अन्तमा हामी यसलाईaबाट बेर्नेछौं पारदर्शी कागज यसले हामीलाई भित्र हेर्ने अनुमति दिन्छ।
अन्तमा, हामी स्ट्रिंगको साथ टाई हुनेछौं। हामी थप्न सक्छौंaटाई वा एउटा बल (जसमा हामी रूखमा झुण्ड्यौं) यसलाई क्रिस्मस टच दिन र प्राप्तकर्ताको नामको साथ ट्याग लटकाउन।
यदि हामी यो देख्छौं कि भित्र हामी धेरै खाली छौं, हामी केहि राख्न सक्छौं क्रिसमस पुतली वा एक नौगट लागि टोकरी सेट र यसलाई अझ क्रिसमस टच दिनुहोस्।
कि क्रिष्टमसको अभाव बहाना होइन यस क्रिसमसलाई तपाईका उपहारहरू उत्तम सम्भव तरीकाले प्रस्तुत गर्नका लागि। क्रिसमस क्रिसमस!
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » कसरी क्रिष्टमस उपहार लपेट्न